Wafdi ka socda dowladda Norway oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi ka socda dowladda Norway oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho
Wafdi uu hoggaaminaayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway Børge Brende ayaa booqasho aan hore loo sii shaacinin maanta ku yimid magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Diyaarad ay saaran yihiin wafdiga uu hoggaaminaayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway Børge Brende ayaa maanta kasoo degatay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibaddda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa wafdigaasi kusoo dhaweeyay garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho, iyagoona kadib loo sii gudbiyay xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Saacadaha soo socdo ayaa la filayaa in wafdigaasi ay kulamo kala duwan la yeeshan madaxda sare ee dalka, waxayna kulankaasi uga hadli doonaan xoojinta xiriirka labada dal iyo ka hadalka taageeradda ay dowladda Norway siiso Soomaaliya.
Dowladda Norway ayaa ka mid ah dowladaha xiriirka wanaagsan la leh Soomaaliya, waxayna haatan doonaysaa in dowladda Soomaaliya ay isla meel dhigaan dadka sharciyada loo diiday iyo kuwa lagala noqday ee ku sugan dalkaasi Norway.
Waa markii ugu horeeysay oo uu magaalada Muqdisho soo gaaro wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway Børge Brende, waxayna booqashadiisa kusoo beegmaysaa xilli Soomaali badan oo ku sugan dalkaasi Norway sharciyadii lagala noqday, halka kuwa kalena la qorsheeynayo in dib loogu soo celiyo Soomaaliya.